आज साउन १५, खीर खाने विचारमा हुनुहुन्छ ? यसरी पकाउनुहोस् स्वादिष्ट खीर – Sandesh Press
आज साउन १५, खीर खाने विचारमा हुनुहुन्छ ? यसरी पकाउनुहोस् स्वादिष्ट खीर
July 30, 2021 164
काठमाडौँ – साउन १५ गते नेपाली समाजमा खिर खाएर मनाइँदै छ । वर्षा ऋतुका बेला असार १५ गते दही, च्युरा र साउन १५ मा खिर खाने प्राचीनकालदेखिको नेपाली परम्परा छ ।
साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो । दूधमा मरमसलालगायत चिजबिज हालेर बनाइने खिरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकाले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ ।संस्कृत भाषामा पायस भनिने खिर सात्विक आहारमध्येमा उत्तम
मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि यसलाई महत्वपूर्ण वस्तुका रुपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए। साउन महिनामा गाउँघरमा पनि खेतीपातीको काम सकिन्छ ।
हरियाली बढी हुने भएकाले घाँस बढी पाइन्छ । राम्रा धेरै घाँस पाइने बेलामा गाई, भैँसीले पनि धेरै दूध दिन्छन् । दूध धेरै भएपछि इष्टमित्र, चेलबेटीलाई घरमा बोलाएर खिर खाने चलन चलेको हो । साउन भगवान् शिवको महिना हो । शिवलाई दूध र दूधमा बनेका
परिकार मनपर्ने भएकाले खिरलगायत मिठाइ विधिपूर्वक चढाइन्छ । यसैले गर्दा साउनको मध्य पारेर खिर खाने प्रचलन चलेको हुनसक्ने धर्मशास्त्रविद् गौतमले बताए। तर यसको कुनै शास्त्रीय वचन भने छैन ।
Prevआज साउन १५ खिर खाने दिन: साउने झरीमा तातो खिर, स्वास्थ्यलाई धेरै राम्रो !
Next३० वर्ष पुगेका हरेक महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्छ यी ५ परीक्षण, नत्र देखिन्छ घातक समस्या
२४ वर्षकी सामाजिक कार्य गर्दै हिडेकी युवतीको दिनदहाडै बीच बजारमा ह,’त्या, परिवारले समेत उजुरी दिन मानेन
शंखमुल पुलबाट बागमतीमा एक महिलाले हाम फालेपछि ……..
फागुन १६ गते नेपाल बन्दको घोषणा (हेर्नुहोस सूचना)
भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी ७ गल्ति, जसका कारण हुन्छ मधुमेह वा डायबिटिज